खालीपेटमा लसुनको पोटी खानाले यस्ता चम्कारिक फाईदा, सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ - Eall Nepal
खालीपेटमा लसुनको पोटी खानाले यस्ता चम्कारिक फाईदा, सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ
लसुन, जो हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुन्छ । तरकारीको स्वादर वास्ना बढाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ। यद्यपी लसुनको साइनो स्वादसँग मात्र जोडिएको छैन । खाली पेट लसुन खानुको अरु थुप्रै फाइदा छन्।
यदि हरेक दिन एक केस्रा लसुन मात्र सेवन गरियो भने, त्यो अमृतसमान हुन्छ । त्यसको लागि एउटै सर्त हो, बिहान खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्छ।
के हुन्छ लसुनमा ?
लसुनमा भिटामिन र मिनरल्सयुक्त पोषक पदार्थ भरपुर मात्रामा हुनछ । यसमा खासगरी भिटामिन बि १, बि ६, सी, म्यागजिन, क्याल्सियम र कपर पाइन्छ । दैनिक लसुन सेवन गर्दा दिनभरका लागि सरीर सुरक्षित रहन्छ । साथै इनर्जी पनि मिल्छ ।
कसरी खाने ?
संभव भएसम्म लसुन विहानै खानुपर्छ, खाली पेटमा । लसुनलाई काँचो खानु बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनभने पकाइएको लसुनमा औषधिय गुण एकदमै कम हुन्छ । यसको प्राकृतिक एन्टिबायोटिक गुण प्राप्त गर्नका लागि खाली पेट सेवन गर्नुपर्छ ।
कोलोस्टोर घटाउनदेखि उच्च रक्तचार रोक्नसम्म
आर्युवेदमा लसुनलाई जवान रहने औषधी मानिन्छ । साथै यसले केहि रोग जस्तै पायल्स, कब्जियत, कानको दुखाई, उच्च रक्तचाप, अरुची मा यो उपयोगी हुन्छ । लसुन एक महत्वपूर्ण एन्टिवायोटिक पनि हो । खाली पेट लसुन खानुको के फाइदा छ त ?
कोलेस्टोर नियन्त्रण गर्न
कोलेस्टोर नियन्त्रणका लागि लसुन निकै प्रभावकारी मानिन्छ । बिहान खाली पेटमा लसुनको केस्रा सेवन गर्नुपर्छ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण
बिहान खाली पेटमा लसुन सेवन गर्दा रक्त प्रवाह नियमित हुन्छ । यसले हृदयसम्बन्धी समस्या हटाउँछ । लसुनले रक्त नलीलाई चौडा बनाइदिन्छ, त्यही कारण रक्त प्रवाह सजिलो हुन्छ । जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, उनीहरुले खाली पेट काँचो लसुन सेवन गर्नुपर्छ । यदि लसुनको स्वादमा रुची छैन भने लसुन सेवन गरिसकेपछि एक गिलास दुध सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकको परामर्श अनुसार लसुनको सप्लिमेन्ट पनि लिन सकिन्छ।
हृदयलाई स्वस्थ्य राख्न
हृदयलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि लसुन एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसले रक्त प्रवाहलाई सुचारु गराउँछ, कोलेस्टोर नियन्त्रण गर्न । यहि कारण हृदयरोगको भयबाट बचाउँछ । मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि दिनहुँ दुई केस्रा काँचो लसुन पिसेर सेवन गरौ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन
लसुनमा भिटामिन सि, बि-६, म्यानिज र सेलेनियम हुन्छ । यी सबै तत्वले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । लसुनमा रहने एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिमाइक्रोवियल गुणले शरीरमा रोग लाग्न दिदैन ।
फंगल इन्फेक्सनको बिरुद्ध
लसुनमा शक्तिशाली एन्टिफंगल गुण हुन्छ, जसले दाद, चिलाउने लगायतकासँग लड्ने क्षमता राख्छ । यो केन्डिया नामक इन्फेक्सनसँग पनि लड्छ। जहाँ इन्फेक्सन भएको त्यहाँ लसुनको तेल लगाउनुपर्छ । काँचो लसुन नियमित रुपमा सेवन गर्नुपर्छ।
लसुनमा रहेको एन्टिभाइरल र एन्टि इन्फ्लेमेटरी गुणले शरीरमा विभिन्न प्रकारका एलर्जीसँग लड्न मद्दत गर्छ । एलर्जीको कारण श्वास नली सुन्निने समस्यामा समेत लसुन उपयोगी मानिन्छ ।
पेट सम्बन्धी समस्यामा
पेट सम्बन्धी समस्या हटाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ। यसका साथै लसुनको सेवनले पेटमा रहेको विषाक्त पदार्थ सफा गर्छ।
यदि दाँतको दुखाईबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, लसुनको एक केस्रा पिसेर दाँत दुखेको स्थानमा लगाउनुपर्छ। केहि समयपछि दुखाई कम हुन्छ। किनभने लसुनमा एन्टी ब्याक्टेरियल र दुखाई कम गर्ने गुण हुन्छ।
यदि खानेकुरामा अरुची छ भने त्यसको राम्रो समाधान हो, लसुन। बिहान नियमित रुपमा लसुन प्रयोग गर्नुहोस्, यसले पाचन यन्त्र ठीक हुन्छ।
– लसुन सेवन गरेपछि त्यसको साइड इफेक्ट जस्तै, सुन्निने, पेट फुल्ने, ग्याष्ट्रिक हुने, पेटको खराबी हुने, सास गन्ध आउने हुनसक्छ।
– यसले रगतलाई पातलो बनाउँछ। त्यसैले रगत पातलो बनाउने औषधी सेवन गरिरहेकाहरुले यसको सेवन गर्नुअघि चिकित्सकको परामर्श लिर्नैपर्छ।
भोली शुक्रबार काठमाडौंमा १० घण्टा बिद्युत् कटौती हुने
यदि तपाईको अनुहारको कालो छाला गोरो र चम्किलो बनाउन चाहानु हुन्छ भने यसरी गर्नुहोस आलुको रस
नेपालका बारेमा इन्डियाको एउटा च्यानलले बनायो यस्तो भिडियो ( नेपालको माया लाग्ने हरेक नेपालीले अवश्य पढ्नुहोला
स्मार्टफोनमा फेसबुक वा ईन्टरनेट वा गीत सुन्दा पनि छिटो ब्याट्री सकिदै छ भने यी टिप्स अपनाउनुहोस दोब्बरजतिनै ब्याट्री ब्याकअप दिने छ, सबैको जानकारीको लागि सियर गरौ …
बादर पनि अचम्मैको , मन्दिर परिसरमा धुप बत्ती संगै आगो बाल्दै गरेको भिडियो यूटुबमा यसरी भाईरल भयो हेर्नुहोस यो भिडियो
निमन्त्रणा पत्र नपाएकाहरुलाई पनि नेकपाको चियापान कार्यक्रममा चिल्हे निम्तो ( कार्यक्रमको तालिकासहित)
नेपालका सरकारी कर्मचारीहरुका लागी खुसिको खबर ! अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर १ तह बढुवा सहित यो सुविधा दिएर खटाइने -सेयर गरौँ
हरेक नेपालीका लागी खुसिको खबर ! सुन्दर देशको सुचीमा पहिलो स्थानमा
ग्यास्ट्रिक बढेछ भने यसरी सजिलै रुपमा कन्ट्रोल गर्न सकिने उपचार बिधि
१ मिनेटमै पूरुषको यौनशक्तिलाई १० गुणा बढाउने निकै सरल उपाय
अनियमित जीवनशैली र खराब खानपानका कारण एसिडिटी बढेर दुःख पाउनु आधुनिक जीवनशैली अपनाउने हामी सबैका लागि सामान्य कुरा हो ।…
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको भोली चियापान कार्यक्रम छ । विगतदेखि नै नेपालीहरूले मनाउँदै आएका चाडबाड र साँस्कृतिक पर्वहरूका अवसरमा शुभकामना…
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने नयाँ उपाय…
विवाहित पूरुषको लागि शीघ्रस्खलन निकै ठूलो समस्या हो । यसले दाम्पत्य जीवनमा पनि ठूलो असर पुर्याउँछ । मानिसहरु यस समस्याबाट…
यसकारण २ वर्षमै स्तन बढे, ४ वर्षमै महिनावारी : बाल्यकालमै जवान भएकी बालिकाको कथा
एजेन्सी। अस्ट्रेलियाकी एमिली डोवर नामकी यी बालिकाको उमेर मात्रै ५ वर्ष भयो । तर उनको शरीरका सबै अंगहरु जवान महिलाको…
एउटा यस्तो ठाउ जहा रा बिताउने अहिले सम्म जिउँदो फर्केको छैन: मुटु बलियो हुने मानिसले मात्र हेर्नुहोला
एजेन्सी । भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा ३ सय किलोमिटर टाढा राजस्थानको अलवरमा एउटा पूरानो किल्ला छ । यो किल्ला अहिले भग्नावशेषको…
हरेक पुरुषले थाहा पाउनुहोस महिलाहरुलाई यी ५ यौन आशन अस्याध्यै मन पर्छ
हिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन यस्ता छन !श्रीमान श्रीमती बिच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ?…
सिपिएलमा सन्दिप लामिछानेको टिम प्ले अफमा प्रवेश
वेस्टईन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप सम्मिलित भएको टिम एस टि किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रोईट्स प्ले…
तपाईका लागि यस्तो छ २०७५ भाद्र १४ गते बिहीबार को राशीफल
तपाईका लागि यस्तो छ २०७५ भाद्र १४ गते बिहीबार को राशीफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,…
भुलेर पनि पुजा कोठामा राख्नु हुदैन पितृको तस्बिर : कारण यस्तो छ
अहिले पितृ पक्ष (सोह्र श्राद्ध) चलिरहेको छ । हिन्दुहरुले पितृ पक्षमा श्रद्धापूर्व आफ्ना पूर्वजलाई सम्झदैं श्राद्ध गर्ने गर्छन् । सोह्र…
प्रधान सम्पादक (अध्यक्ष )
केशब सिंह धामी